Indlu yeholide kwiinduli
Emazantsi entlambo yaseBenevello, entliziyweni yeLanghe (ePiedmont), kumgama omfutshane ukusuka kwidolophu yaseAlba, edume ngeetruffles zayo kunye newayini ezidumileyo kunye neekhilomitha ezingama-80 ukusuka eTurin, uya kufumana indawo yokubuka iindwendwe kwi-cottage. "Le Vigne". Indlu yasefama ehlaziyiweyo eyakhiwe ngamatye amangalisayo engaphakathi kwendawo enenduli ebizwa ngokuba yi "Tenuta Ticino", apho unokuxabisa iimbono eziphefumlayo zomhlaba ogqunywe zizidiliya kunye nemithi yehazelnut, edume ngembali, inkcubeko kunye negastronomy. Lo mhlaba ungaphezu kweehektare ezingama-30 ubukhulu kwaye ungakonwabela uhambo olude kwindalo ecaleni kwendlela esayinwe kakuhle, undwendwele ipaki yezityalo okanye ube nepikiniki phakathi kwendalo ngokusebenzisa izinto ezikhoyo zepaki ezifana neseti yebarbecue, iinkuni- isitovu kunye nezibonelelo ezikhoyo kuzo zonke iindawo zepikiniki ezabelwe.
Isakhiwo sifakwe emaphandleni nje kwi-500 m ukusuka kwiziko le-Benevello kunye neekhilomitha ezili-12 ukusuka kwidolophu yase-Alba. Amagumbi axhotyiswe ukubonelela ngayo yonke induduzo kwaye anikwe incasa ehlonipha izithethe zasekuhlaleni. Le ndlu inegumbi lokulala elineebhedi ezimbini kunye neebhedi ezimbini ezingatshatanga, igumbi lokuhlala, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, igumbi lokuhlambela labucala kwaye lixhotyiswe ngayo yonke intuthuzelo kunye nezinto eziluncedo ezibandakanya iTV DVB, iWiFi, ibha encinci, iHi-Fi, igumbi lokuhlambela labucala, ukufudumeza okuzimeleyo, solarium, yokupaka yabucala kunye barbeque.
-Umabonakude weDijithali osemhlabeni "DTTV"
-Ukufikelela kwi-Intanethi kwasimahla
- dvd/divx umfundi
-Ibhedi yomntwana (iyafumaneka xa iceliwe)
- Indawo yokupaka imoto yabucala
- Iholo yesidlo
- Indawo yokugcina ibhayisekile
- Intaba-ibhayisekile yohambo
- Isixhobo esincinci / igumbi lokusebenzela